Muxuu CV- gu ka kooban yahay? – Somalismsjobs
Muxuu CV- gu ka kooban yahay?
Muxuu CV’gu ka kooban yahay?
Magaca iyo macluumaadyada xiriirka – Cinwaanka, emaylka, lambarka telefoonka
Arji shaqo – Liisgaree goobahaadi hore ee shaqo, ugu horeysii kii ugu dambeeyay. Sheeg sidoo kale waqtiga uu socday xiriirka shaqadu. Sawir ka bixi shaqooyinkaadi iyo xirfadaha aad shaqada ka baratay.
Waxbarashada – U liisgaree shahaadooyinkaada sida ay u kala horeeyay, ugu horeysii tii ugu dabneysay. Ku dar magaca shahaadada, magaca barnaamijka waxbarashada, magaca machadka iyo waqtiga qalinjebinta.
Koorasyada – Ku liisgaree cinwaan u gaar ah hoostiisa koorasyada afka Finnishka iyo koorasyada kale ee aad soo dhigatay.
Awood-xirfadeed kale – Aqoonta afka, aqoonta IT, kaararka ruqsadaha, tusaale ahan baasaboorka nadaafadda
Daabacaadyo ama bandhigyo shaqeedyo kale – Waxaad ku dari kartaa haddii aad dooneyso daabacaadyadaada ama bandhigyadaada shaqo.
Hiwaayado, xilal kalsooniyeedyo – Waxaad sidoo kale soo bandhigi kartaa waxyaabaha aad xiiseyso.
Soo-jeediyayaal – Waxaad ku dari kartaa magacyada dadka kuu ballanqaaday in ay shaqada kaaga warbixnayaan. Ku dar macluumaadyada xiriirka soo-jeediyayaasha. Xusuusnow in aad fasax weydiisato soo-jeediyayaasha.
Ma ogtahey Shaqadoonoow
Ma tahay shaqadoon?
Waxyaabaha kuu sahli kara inaad shaqo hesho
casino online slot on Muxuu CV- gu ka kooban yahay?
online casino best welcome bonus on Sidee Fursad Shaqo Loo Helaa?
Mahamed Ahmed faraha on Ma ogtahey Shaqadoonoow
ISMAIL MOHAMED on Adeegga SAHAN
Abdinasir on Ma tahay shaqadoon?
Xamdi on Ma tahay shaqadoon?